चेपाङको शिक्षामा सबै सुम्पिए किशोरचन्द्रले – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
चेपाङको शिक्षामा सबै सुम्पिए किशोरचन्द्रले
२०७० फाल्गुन २५, आईतवार ०२:१९ गते
खैरहनी । राजनीति र समाज सेवामा विशिष्ट पहिचान बनाएका किशोरचन्द्र ढुंगाना आफ्नो सारा सम्पति खर्च गरेर चेपाङलाई पढाउन स्कुल खोले । पूरै जीवन चेपाङको हकहितमा समर्पित गरे । त्यस्ता समाजसेवी ढुंगानाको निधन भएको १० वर्ष भएको छ । तर उनी धेरैको सम्झनाबाट ओझेल भएका छैनन् । उनै शिक्षासेवी ढुंगानाको सम्झनामा शनिबार स्मृति सभा आयोजना गरियो ।
चितवनको पहाडी क्षेत्रमा बस्ने अति सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी जनजाति समुदाय चेपाङहरुले निकै कष्टपूर्ण जीवन व्यतित गर्छन् । विसं. १९९० सालमा जिल्लाको पहाडी क्षेत्र उपरदाङगढीको शेरबासमा जन्मेका किशोरचन्द्र ढुंगानाले विसं. २०५७ सालमा पूर्वीचितवनको पर्सा करैयामा चेपाङ बालबालिका मात्रै पढ्ने आवासीय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गरेका थिए ।
उक्त स्कुलमा पढेको मात्रै होइन बसेर खाएको समेत पैसा दिनु पर्थेन । कपडा समेत पाउँथे विद्यर्थीले । ‘आफ्नो नामको पाँच बिघा खेत बेचेर स्कुल खोल्नु भएको थियो’ किशोरचन्द्रका भतिजा दिलिपचन्द्रले भने । विसं. २०६० सालको फागुन २४ गते किशोरचन्द्रको निधन भए पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘चेपाङहरु गाउँमा कोही नयाँ मान्छे देख्दा भाग्ने र लुक्ने गर्छन्’ स्थानीय व्यक्ति तथा एकीकृत माओवादीका नेता गोपाल परियारले भने ‘त्यस्तो ठाउँका नानीबाबुहरु बटुलेर पढाउन ल्याउनु भनेको निकै ठूलो काम हो । विद्यालय परिसरमा आयोजित स्मृति सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता बालकृष्ण सापकोटाले राज्यले आँट्न र गर्न नसकेको काम एक्लै गर्ने ढुंगाना अमर भएको बताए ।
पहाडी क्षेत्रबाट चेपाङ केटाकेटीलाई पर्सामा ल्याएर पढाउनु भनेको सहर बजारका युवाहरु पढ्न विदेश गए सरह हो भन्ने एमालेका स्थानीय नेता राजेन्द्र सिवाकोटीको धारणा थियो । चेपाङ बस्ने पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालय कमै छन् । त्यसैले गाउँमा बसेर धेरै पढ्नु भनेको सपना सरह हुने गरेको छ । ढुंगानाले त्यस्तो अवस्थामा चेपाङलाई शिक्षाको ज्योति पु¥याएको उनले बताए ।
ढुंगानाले खोलेको अन्त्योदय विद्यालय चेपाङमात्रै पढ्ने जिल्लाको पहिलो आवासीय विद्यालय हो । उनले ५० जना बालबालिका राखेर पढाउन सुरू गरेका थिए । त्यहाँ पढ्नेहरुले विसं. २०६३ सालदेखि एसएलसी परीक्षा दिन थालेका हुन् । अहिलेसम्म ५३ केटा र २५ जना केटी गरेर ७८ जनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेको शिक्षक रामबाबु चौधरीले जानकारी दिए ।
अन्त्योदयमा कक्षा एकदेखि आठसम्म पढाइ हुन्छ । त्योभन्दा माथि कक्षा ९, १०, ११ र १२ मा पढ्न चेपाङ बालबालिकाहरु छिमेकी विद्यालयमा जान्छन् । खान बस्ने सुविधा भने अन्त्योदयबाटै पाउने गर्छन् । अहिले मकवानपुरका ६ गोरखाका एक र बाँकी चितवनका पहाडी गाविसका गरेर १६१ जना विद्यार्थी त्यहाँ रहेका छन् ।
विद्यालयको भवनलगायतका पूर्वाधारहरु ढुंगानाले आफ्नै सम्पति खर्चेर निर्माण गरेका हुन् । उनको निधनपछि दैनिक कार्य सञ्चालनमा केही कठिनाइहरु बढे पनि आफूहरुले सहयोग जुटाएर विद्यालय चलाउन नछाडेको प्रधानाध्यापक घनश्याम प्रधानले बताए । विद्यालय सञ्चालनमा वर्षको ३४ लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । विभिन्न निकाय र संघ संस्थाबाट २८ लाख रूपैयाँसम्म जुट्छ ।
‘किशोरजीले बालेको शिक्षाको यो ज्योति हामी निभ्न नदिने योजनामा छौंँ । त्यसैले वर्षमा पाँचदेखि छ लाख रूपैयाँसम्म अपुग भए पनि हामी अनेक गरेर विद्यालय चलाइरहेका छौँ’ प्रधानअध्यापक प्रधानले भने ।
फोटो क्याप्सन ः स्मृतिमा मात्र किशोरचन्द्र ढुंगाना